Mabhuku aLuz Gabás: kufamba kunodiwa kuburikidza neyeSpanish nhoroondo yenhau | Zvazvino Zvinyorwa
Kana mushandisi weInternet achitsvaga "Luz Gabás Libros", bhurawuza rinowanzo kuratidza zvinongedzo zvine chekuita nemagwaro akataurwa zvakanyanya pakati pevaverengi vanotaura chiSpanish. Ndezve Semoto uri pachando (2017) uye Iko kurova kwemoyo kwepasi (2019), Iwo maviri enguva dzichangoburwa emunyori wechiSpanish. Aya mazita akakunda kuongororwa kwakanaka kwazvo mumagazini uye mawebhusaiti akatsaurirwa kumabhuku.
Murwendo rwake, munyori anga aine hunyanzvi, akamirawo semupurofesa weyunivhesiti, mugadziri wekuona uye wezvematongerwo enyika. Kudzokera kune ndege yekunyora, Neimwe neimwe yenyaya dzayo ina yakaburitswa, Gabás yanga ichifadza huwandu hukuru hwevaverengi. Chinyorwa chemabhuku nemunyori weHuesca chapera Michindwe muchando (2012) uye Dzokera kuganda rako (2014).
1 Rumwe ruzivo rwehupenyu nezveLuz Gabás
2 "Luz Gabás Libros", kuda kwevadi venhoroondo yenhoroondo
2.1 Miti yemichindwe muchando (2012)
2.1.1 Kupokana kubva mubhuku Palmeras en la Nieve
2.2 Dzokera kuganda rako (2014)
2.2.1 Kupokana uye nhoroondo yezvinoitika
2.3 Semoto pachando (2017)
2.4 Hupenyu hwePasi (2019)
Rumwe ruzivo rwehupenyu nezveLuz Gabás
Akabhabhatidza María Luz Gabás Ariño, akaberekerwa muMonzón (Huesca), Spain, muna 1968. KuUniversity yeZaragoza akawana dhigirii reChirungu Philology. Makore mashoma apedza kudzidza, akatanga kushanda semupurofesa akazara kuyunivhesiti imwecheteyo.
Pamwe pamwe nebasa rake rekudzidzisa, Gabás apedza ongororo dzinoverengeka dzine chekuita nemitauro netsika - izvi zvakashanda kutsigira zvinyorwa zvake. Nenzira imwecheteyo, Akangwara uyu weAragon ave kuzivikanwa semunyori wezvinyorwa zvekunyora, mugadziri wefirimu uye mushandirwi muzvirongwa zvemitambo. Pamusoro pezvo, aive meya weBenasque, Huesca (2011 - 2015).
"Luz Gabás Libros", kuda kwevadi venhoroondo yenhoroondo
Michindwe muchando (2012)
Unogona kutenga bhuku pano: Michindwe muchando
ZveRuzi Gabás, Michindwe muchando yaimiririra kukanganisa kwakafanana nekurota mukati meSpanish mabhuku. Zvakanaka, ino nganonyorwa yakagamuchirwa kwazvo nevaverengi uye ndokuwana ongororo dzakanaka dze (dzinenge) chimiro chakafanana. Parizvino rakashandurirwa muchiPutukezi, chiItaly, chiDutch, chiCatalan nechiPolish. Saizvozvo, mu2015 yakagadziridzwa kune hombe skrini nemutungamiriri Fernando González Molina.
Zvirokwazvo, iyo mibairo yakatorwa nemufirimu yakabatsira kuwedzera kufarirwa kwebhuku raitove rakabata chikamu che best seller. Iwo akakosha akakosha ekuzivikanwa akanyorwa pazasi:
Goyá Makomborero, makumi matatua chinyorwa:
Yakanakisa nzira yekuraira, Antón Laguna.
Rwiyo rweKutanga Kwazvo Michindwe muchandorakanyorwa naPablo Alborán naLucas Vidal.
Sirivheri Mafreyimu, 66a chinyorwa:
Mutambi wemafirimu akanakisa, Mario Casas.
Yakanakisa Spanish Firimu (yakanyanya kuvhota neruzhinji).
Kupokana kwebhuku Michindwe muchando
Takatarisana ne nhoroondo yenhau. Basa rinotarisa pane zvakaitika kuna baba vaLuz Gabás pavakange vaine makore makumi maviri nemana uye vakatamira kuEquatorial Guinea muna 24. Ikoko akatanga kushanda mumunda wecocoa uri muSampaka, paFernando Poo Island. Iyi enclave inomiririra chisaririra cheSpain yapedyo yekoloni yapfuura mukondinendi ye Africa.
Kunyanya pakati pa1959 na1968 chitsuwa icho chaive chikamu chedunhu rinozivikanwa seSpanish Guinea (1926 - 1968). Ikoko, Kilian - protagonist wenhau - aive nerudo rwakarambidzwa naBisila, muranda weBubi. Nekudaro, Gabás anotora mukana weiyo ndima kuratidza zvese kumucheto kwekudzvinyirirwa kunoitwa neSpanish uye nehupenyu hwepeninsular bourgeoisie.
Dzokera kuganda rako (2014)
Ndinodzokera kuganda rako.
Unogona kutenga bhuku pano: Dzokera kuganda rako
Kupokana uye nhoroondo yezvinoitika
Iyo yakaoma musimboti yenoverengeka iri mumakore gumi apfuura ezana ramakore rechiXNUMX. Kunyanya, Gabás inotora muverengi nenyaya dzekuurayiwa kwehuroyi hwakaitwa munzvimbo yeLaspaúles (Huesca). Izvo zvakasarudzika nezvekutambudzwa uku ndezvekuti hazvina kuitiswa neInquisition, asi panzvimbo pevaya vanogara.
Iyo iri pamusoro pevakadzi vaviri vane nhaka yakafanana, vakabhabhatidzwa vane zita rimwe chete - Brianda de Lubich - panguva mbiri dzakasiyana. Ivo vanobatanidzwa nezvinhu zvinoita kunge zvisingatsanangurike nyaya. Parizvino, mainjiniya mudiki haakwanise kutsanangura kukwezva kwakasimba kwaanonzwa kune mutorwa achangosvika muHuesca.
Mhinduro kumanzwiro ake "asina musoro" inoita kunge iri muzvidimbu zvezvinyorwa zvemhuri zvakachengetwa kubva kuMiddle Ages. Mavari zvinoratidzwa kuti wepakati Brianda akapomedzerwa huroyi pamwe nevamwe vakadzi makumi maviri nevatatu. Vatarisana nemamiriro ekupererwa uye asina kujairika, tariro yavo chete iri mune isingaputsike uye isingaori mhiko yerudo.
Semoto uri pachando (2017)
Semoto uri pachando.
Kutanga kweruzivo kunoiswa muMadrid, uko mudzidzi anowira mukutsamwiswa kunoguma nenjodzi yekukudza duel. Mukufananidza, chiitiko ichi chinoenda kunzvimbo mbiri dziri kumabvazuva kweSpain nekumaodzanyemba kweFrance muzana ramakore rechiXNUMX. Kune rimwe divi, Bani reBenasque muAragonese Pyrenees ndiyo yaive nzvimbo yemakakatanwa akati wandei panguva yehondo dzeCarlist uye kumukira kwemuno.
Ukuwo, Hupenyu huri mukati memisha inopisa yemaguta eLuchón, Cauterets neBagnerés inotsanangurwa. Aya mataundi - ari pakati pemucheto wekumaodzanyemba kweFrance Pyrenees neMakomo Akatukwa - akashanyirwa zvakanyanya nevamiriri veRussia, France neEngland. Ichi chiitiko chaizivikanwa se "thermal Tourism".
Iwo dzimba dzekupisa dzaive nzvimbo dzakakomberedzwa nehunhu uko vanhu vakauya kuzotsvaga kwekupora kwemweya uye pamweya. Mukutaura, ivo vaingova nedzimba dzevhu dzehusope. Nekufamba kwenguva, zvivakwa zvezvivakwa zvakavakwa munzvimbo iyo yaipa makamuri epamusoro uye varaidzo (theatre, kasino, mimhanzi, kukwira) ...
Nenzira iyoyo, tambo yekurondedzera inotakura nyaya dzinoverengeka dzerudo kuburikidza nemazera maviri akasiyana, kunyangwe pasi pemamiriro akafanana. Uye ndezvekuti, zvese muPyrenees neMadrid, ivo protagonists vanogara vakatarisana mukurwira kwemukati pakati pezvishuwo zvemwoyo nekufunga.
Iko kurova kwemoyo kwepasi (2019)
Iko kurova kwemoyo kwepasi.
Unogona kutenga bhuku pano: Iko kurova kwemoyo kwepasi
Kusiyana nenhoroondo dzake dzekare, Mune rino bhuku, Gabás inoongorora mhando yerondedzero padyo neiyo nhema nhema uye chakavanzika. Zvisinei, munyori weAragonese anodzokera shure munguva. Pachiitiko ichi, kusvika kumamisha eSpain kwema60, 70s uye 80. Apo misha yakaita saJánovas (Huesca), Fraguas (Guadalajara) neRiaño (León), yaive nzvimbo yekutorerwa kunorwadza.
Mushure mekudzingwa kwekumanikidzwa kunoitwa nehurumende, zvivakwa zvekare uye nenyaya dzemhuri dzinopfuura chiuru dzakapera zvachose. Naizvozvo, Izvo hazvishamise iyo inonzwisisika yekuda mhosva muAquilare, iro rekunyepedzera guta (ine maficha emisha yakataurwa mundima yapfuura) ye Iko kurova kwemoyo kwepasi… Kugara uchisuwa nyika yemadzitateguru.
Alira, protagonist, anogara nhaka imba yakasakara iyo yanga iri yemhuri yake kwezvizvarwa zvakati. Nehurombo, Aquilare iri kusangana nehunhu husingamisike hwevanhu, hunowedzerwazve nemitemo yekudyara masango inokurudzirwa nehurumende yepakati. Kuita kuti zvinhu zviwedzere kuoma, mari yekuchengetedza dzimba zviri kuomera zvishoma nezvishoma.
Mutsara naLuz Gabás.
Naizvozvo Alira anofanirwa kusarudza pakati pekurwira nyika dzemhuri yake kana kutora hupenyu hunopokana, hwakabatanidzwa mune chazvino. Naizvozvo, danho rinonyengera rinomiririra kupokana kuri pachena pakati pevanhu nenharaunda. Uye, kuita kuti zvinhu zviwedzere kuipa, pakati pekushanya kubva kune dzimwe shamwari dzechidiki, chitunha chinoonekwa mudura repamba.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Vanyori » Mabhuku naLuz Gabás
Zvikanganiso zvakawandisa pakuperetera